I-JMR BlueStor SHARE Iseva Yokugcina Yenethiwekhi Ye-HD Ebambisene ne-4K Izicelo Zokugcina Zomsebenzi Okwabelwana Ngomsebenzi - I-NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Isakazo Sokwasemthethweni se-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Ukudalwa kokuqukethwe » I-JMR BlueStor SHARE Iseva Yokugcina Yenethiwekhi Ye-HD Ebambisene nohlelo lwe-4K Lokusebenza Kokuhlelwa Kokusebenza Kokusebenza
U-Gordon Moore, ku-1965, wabikezela ukuthi inani labadlulisi be-IC noma i-chip lizophindaphindwa cishe njalo eminyakeni emibili, noma ukuthi ukuxubungula kwe-IC kungandiswa ngokwanele ngezindleko ezifanele cishe njalo eminyakeni emibili. Ngokufanayo naku-1950s, i-IBM ibonise idrayivu yokuqala yediski eyinkimbinkimbi eyayizilinganiso zamafriji amabili anezinhlamvu ze-50 "x24" ukunikeza i-3.75MB yokugcina idatha; nge-1956 version yayo edidiyelwe ohlelweni layo le-RAMAC 305 eliphethe i-5MB yedatha ku-$ 10k nge-MB ($ 10 nge-MB). Uma kuqhathaniswa, umshayeli we-8TB wanamuhla ubiza cishe u-$ 0.038 nge-GB ($ 3.8 x 10-8 nge-MB) futhi uya ku-100TB ku-3.5 ngaphakathi. ifomu le-2025, ngokusho kwe-ASTC, ekhula ku-30% CAGR. Bheka ishadi ngezansi.
Uma sibheka ukuziphendukela kwemithombo yobuchwepheshe besitoreji sekhulu leminyaka elidlule, inzuzo eyodwa ezuzisayo kusukela ekuthengiseni okuqhubekayo kokuhlanganiswa kwezinto kanye nezindleko zesistimu kanye nokuthuthukiswa kwezinhlelo zokusebenza zokugcina isofthiwe yokugcina isuke kude nomthengisi onogunyaziwe, oyedwa, othengayo izixazululo zesikhathi esidlule zithathwe yi-hardware ezithengiwe ngezimpahla ngokusebenza okwandayo, ukusebenza kanye nobuchwepheshe be-homogeneous endaweni yokuncintisana ngokuzimela. Ukuze bazihlukanise ngokwabo, abakhiqizi abaningi abancane abagcina amasethingi bangeze inani lezinhlelo zabo kubandakanya ukukhethwa kwama-HDD, ama-SSD kanye nokushayela kwe-hybrid, ukuthuthukiswa kwe-ASIC ngokwezifiso, ama-backplanes angenawo ama-CI kanye nama-NIC akhethekile okuthuthukisa ukusebenza nokungahleleki; ukuvalwa okungcono kanye nemiklamo yezingcweti zokusabalalisa okwedlulele ngokwengeziwe nokulawulwa komsindo; i-RAID yombili, ukunikezwa kwamandla okushisa okushisayo nokuqapha okungenasandla nokuhlola ukuthuthukisa ukuthembeka kanye ne-MTBF, nezinhlelo eziphambili ze-software / ze-OEM izinhlelo zokusebenza zokuthuthukisa ukusebenza. Umphumela wuhlelo lokugcina lunikeza ukusebenza kwezinga lebhizinisi, ukwethembeka nokusebenza ngechungechunge lezindleko zabathengisi abaphezulu.
Enye inkampani enjalo enikezela uhlelo olunjalo olusekelwe eCalifornia I-JMR Electronics, Inc. kanye ne-Dual RAID yabo engabizi kakhulu BlueStorTM Hlanganisa iseva yesitoreji enethiwekhi enikwe amandla yi-euroNAS software OS.
Ihloswe ku-pro-av, encane / ikhebula /satellite, iziteshi zokusakaza kanye nokukhiqizwa / ukukhiqizwa kokuthunyelwe okudingekayo nge-speed Ethernet noma kwi-Fiber okusekelwe, izinhlelo zokusebenza eziphezulu (isitoreji esabelwe) ezidinga ukusekela okunamandla okuphezulu, iseva ye-BlueStor SHARE ilungele ifayela elikhonza, ukulinganisa ukulayisha kanye nephutha- i-imeyli ebekezelayo / iseva yewebhu / ukusakaza imidiya, isitoreji se-A / V (i-Audio / Ividiyo) yesitoreji sokusebenza, i-HA kanye nezinhlelo zokusebenza zokugcina isipele. Ilinganiselwa izikhathi ezinhlanu ukuya ngaphansi kwamanye ama-enterprise-class offerings, itholakala kuze kube yi-160TB yamandla wedatha ku-3U evulekile futhi ingakwazi ukudlula ngaphesheya kwe-1 PB eneyunithi eyodwa yekhanda. Ilayisensi yesofthiwe ehlinzekwa kusukela ekuqaleni ivumela amandla okugcina okungenamkhawulo ngaphandle kwesidingo sokuthuthukiswa kwelayisensi.
"Iseva yethu yenethiwekhi yesithathu isizukulwane sethu yisiphendule sethu kubaphathi be-IT noma abaqeqeshiwe be-A / V abafuna ukusebenza okufanayo, ukwethenjwa nokulula ukusetshenziswa kwamagama amakhulu amakhulu kodwa ngaphandle kwethegi lentengo ebiza kakhulu," kusho uJosef Rabinovitz, umongameli we-JMR. "Iminikelo yokuncintisana emikhulu" ihamba ngokuphindwe kabili kakhulu futhi ayihambisani nokuphakama kwethu kwesistimu yefayili noma lula ukusetha nokusebenza. Abancintisana abancinci balwela ukulinganisa intengo yethu futhi abakwazi ukufanisa ukwakhiwa kokwakhiwa kwesistimu yethu, ukwethenjelwa nokusebenza, kanye nokusekelwa kwe-pre / emva kokudayiswa kwamakhasimende ethu. Ngokuhlanganisa ukusebenza kwe-SAS RAID kanye nefayili yefayili ibe yunithi eyodwa, uhlelo lokusebenza lethu lwakamuva lwe-server lunikeza isitoreji esilula, esithembekile, esiphezulu sokusebenza samanethiwekhi amanethiwekhi, okuvumela amakhasimende ethu ukuba angenamkhawulo ekwenzeni kwabo ukwandisa izinhlelo zokusebenza emafwini, ama-virtual and clustered environments. "
Ngokusho kukaRabinovitz, iseva yesitoreji se-BlueStor SHARE inesakhiwo esiyingqayizivele se-patented se-patented esebenzisa izintambo ezimbili kuphela endleleni yedatha, ukunciphisa imingcele ye-airflow namaphoyinti okuhluleka. Isistimu ye-3U ephakanyisiwe uhlelo lwe-SAS / SATA lingakwazi ukufaka ama-3.5 "noma i-2.5" SAS, i-SATA, noma i-Solid State Drives (SSD) enikezwe ku-1,800 MB / s nge-SATA-III imoto kanye ne-3,000 MB / s esebenzisa i-SSD kuze kufike ku-160TB umthamo, futhi isebenzisa ukushayela kwe-disk ekhonjiwe ngokuzenzakalelayo eklanyelwe-ku-lightweight, izindleko eziphansi, ukugudluza amandla okudambisa i-disk drive kanisisindo yobuqotho besignali obuphakeme kakhulu nokugeleza komoya. Umphumela waba amazinga okushisa aphansi, ukusebenza kahle okuphezulu nokuthembela ngokweqile.
Iseva iphinde inikeze izici eziningi zebhizinisi ezihlanganisa izixhumi eziyishumi nambili ze-6Gb / s SAS / SATA disk drive, ezine (N + 1 ezilungiselelwe) abalandeli be-cool-velocity ephezulu kakhulu abalawulwa ukuphefumula, okuyi-620W (N + 1) ukuthengiswa kwamandla, ama-24-port ama-6GB angaphakathi we-SAS okwandisa, ama-RAID amabili (angakhetha) ama-RAID abalawuli be-PCI3.0 SAS, amathrekhi angu-1Gb / s ama-NIC noma ama-interfaces e-Dual / Quad 10GbE okukhethwa kukho, imidwebo yesiteshi se-quad memory, i-PCIe expansion slots, futhi ibhodi lebhodi eliphezulu lokusebenza elinomqondo we-quad 3.5 GHz Intel I7 CPU noma ama-CPU ama-8-core Xeon, futhi an IntelI-chipset ye-Z97 Express.
Ngaphezu kwalokho, iseva yokugcina ye-BlueStor SHARE yi-SES 2.0 ehambisanayo futhi inikeza isimo sangempela sesikhathi sediski / isimo sokuhluleka kuzo zonke i-driy bay kanye nokulawula okubonakalayo komsebenzisi kanye nezinkomba zamandla nesimo sokupholisa nge-alamu ebonakalayo nezwakalayo, kanye ne-panel front " ku-off "futhi" ukusetha kabusha "ukushintsha.
Ukuhlanganiswa kwe-SAS RAID kanye ne-server iseva ukusebenza ku-unit eyodwa, iseva yokugcina isitoreji se-BlueStor SHARE igcwalisa isidingo esiphakathi kwezinhlelo zebhizinisi eziphakeme kakhulu ezigcina izindleko eziningi futhi ezingezansi ekupheleni kwezinhlelo, ezingeke zinikeze ukusebenza okunjalo nokuthembeka. Iseva yesitoreji se-BlueStor SHARE itholakale ekulungiselelweni okunezinhlelo ezine zokonga, okuphezulu: (1) Ibhizinisi le-64-bit; (2) i-Premium Ultra; (3) I-Cluster 64-bit ne (4) I-Cluster ye-Fiber Channel. Ukusethwa kweBhizinisi le-64-bit eyisisekelo kunikeza ukusekelwa kwe-RAID 1,5. Ukulungiswa kwe-Premium Ultra ne-HA (High Availability) ye-Cluster, enokusekela okunamandla okugcina isitoreji, inikeza ukwesekwa kwazo zonke izilawuli ze-RAID zangaphakathi ze-hardware ze-RAID, ukuxhumana kwenethiwekhi ye-10 Gb / s ne-802.3ad link aggregation (LACP), ukulinganisa umthwalo nokufaka izici ze-failover. Umkhiqizo we-HA Cluster (okudinga ukusetshenziswa kwamaseva amabili) yiwona ozogcina izindawo ezifuna indawo lapho ukusebenza, ukulondeka kwedatha kanye nokutholakala kwe-100% kuyimfuneko ebalulekile, futhi inikeza izici ze-Premium Ultra nge-redundancy ephelele kanye ne-active failover esebenzayo. I-Cluster ye-Fiber Channel inikeza ukutholakala okuphezulu, ukwethenjwa nokuvikeleka kwempahla yesakhiwo. Ngaphezu kwalokho, abasebenzisi bangaba nelayisense yokugcina okungenamkhawulo ngokuthenga, ngokungafani namalayisensi 'akhokhela njengoba uhamba' emncintiswaneni.
Isofthiwe yokugcina isitoreji se-BlueStor SHARE i-euroNAS isofthiwe inenqwaba yezici, okwenza ikhangele kokubili ochwepheshe be-IT kanye nabachwepheshe be-A / V, kuhlanganise ne-AFP, i-NFS, i-SMB / CIFS nokusekela kwe-FTP; I-target iSCSI eyakhelwe ngokusekelwa kwe-VMware ESX, i-Microsoft Hyper-V, i-Citrix XEN; kanye ne-Fiber Channel ngokusekelwa kwe-VMware ESX, i-Microsoft Hyper-V, i-Citrix XEN; ukuphindaphinda okungenasisekelo okuphindaphinda ukugcinwa kwesinye iseva; ukuphindaphinda okufingqiwe okuphindaphinda idatha ebukhoma ngokushesha nokuthembeka; kanye nama-point-in-time snapshots alulame amafayela esimweni sangaphambili. Ngokuqondile, isofthiwe ihlanganisa:
Izici ze-Software ze-EuroNAS Isitoreji
I-Hardware agnostic OS
Abakhiqizi bokugcina isabelo bavame ukusebenzisa i-hardware yokuthengisa kanye nesistimu yokusebenza eyosebenza kuphela kwi-hardware ebucayi. Nge-euroNAS, amaseva ajwayelekile angakwazi ukulinganisa izixazululo ezinamandla zokugcina kodwa ngezingxenyana zezindleko.
Isitoreji esichazwe nge-Software
I-euroNAS iguquguquka futhi isekela amaseva amaningi emakethe kodwa ayidingi ihadiweli lensimbi. Ingasetshenziswa njenge-App Effect Storage System esebenza kahle kakhulu ngaphakathi kwendawo evumelekile ukuze abasebenzisi bangasebenzisa isitoreji sabo esikhona ukuze bakhe into enkulu.
I-euroNAS isekela wonke amaklayenti amakhulu nezinhlelo zabo zomdabu. Isebenza ne-Microsoft Windows (XP, 7, 8, 10, 2003 / 2008 / 2012, Hyper-V), i-VMware ESX / ESXi, i-Apple MAC OS X incl. XSAN, StorNext, Citrix XenServer 5.x / 6.x, i-Linux.
Iseva ingahle ilungiswe njengelungu le-Active Directory Domain, abasebenzisi namaphasiwedi azovumelaniswa ngokuzenzakalelayo nesizinda. Abaphathi besistimu bangakwazi ukuphatha kalula abasebenzisi babo nokuqinisekiswa.
Ukusekela kwe-SMB / CIFS
Imikhiqizo ye-euroNAS isekela ukwabelana ngamasheya nge-SMB (Umlayezo Weseva Ukuvimbela izinguqulo 1, 2 kanye ne-3) / CIFS (I-Common Internet File System) izivumelwano zamakhasimende we-Windows.
Ukuxhaswa kwe-AFP kuhlanganisa. Ukubukeka
Imikhiqizo ye-euroNAS isekela ukwabelana ngamasheya nge-AFP (Apple Filing Protocol) yamakhasimende akwa-Apple. Ukwengeza, i-euroNAS Premium iphinde isekele ukukhanya, isici esithuthukile, esenza usesho lokuqukethwe okusheshayo okusheshayo. Ukufakwa kokuqukethwe kokuqukethwe kwenziwa ngaphakathi kwiseva, okuthuthukisa ukusebenza nokunciphisa ukulayisha kwamaklayenti e-MAC.
Imikhiqizo ye-euroNAS ingasetshenziselwa ukufinyelela idatha ngokusebenzisa i-NFS (I-Network File System Protocol) yezinkampani ze-Linux / Unix
I-iSCSI iyi-IP-based storage networking protocol, evumela ukuthi kudalwe ama-disks wangempela (i-target iSCSI) kuseva engasetshenziselwa ukwenziwa komsebenzi, isitoreji esabelwe njll. Akudingi noma yikuphi amadivaysi okukhonjiswa kwama-cabling nama-network aqhathaniswa neFiber Channel izinhloso. Imikhiqizo ye-euroNAS isekela i-iSCSI, i-VAAI (i-vStorage API ye-Array Integration) yokusheshisa i-VMWare ne-CHAP (Inselelo-Inkinga Yokuqinisekiswa Kwe-Handshake) yokuphepha kwenethiwekhi.
Ukusekelwa kwe-Fiber Channel
I-Fiber Channel (FC) iyinkampani yokugcina isitoreji esiphezulu sebhizinisi. Nge-euroNAS, abasebenzisi bangakha uhlelo lokusebenza lwe-FC Storage oluzohlinzeka nge-I / O yebhizinisi kanye nesivinini. Isekela ngesivinini se-16 Gb / s. Nge-SAN Cluster, ingafaka idatha yesistimu esebenzisa ibhizinisi le-protocol ye-FC.
I-euroNAS Premium ne-HA Cluster ingahle ilungiselelwe i-Cache Tiering. Ithuthukisa ukusebenza kwesiphakeli lesitoreji ngokuguquguqula idatha esetshenziswa kaningi kudivayisi esheshayo, encane njenge-SSD. Le seva yokugcina isitoreji izohlinzeka ukusebenza okuphezulu kwe-I / O kanye nomthamo omkhulu ngesikhathi esisodwa. Kuzohlaziya ngokuzenzekelayo ukudluliswa kwedatha okungenayo futhi kuhambise amabhulogi asetshenziswe kaningi kuma diski esheshayo (SSD). Uma iseva isebenza isikhathi eside, iyosebenza kahle kakhulu.
Ukuhlinzekwa okuncane kuyi-euroNAS Premium isici sokudala imiqulu ebonakalayo nekhala elengeziwe elihlangene kunevolumu yangokwenyama (ngokusekelwe nje-ngokwaneliseka kanye nesikhathi esisodwa), lapho kudalwa khona. Inzuzo kulokhu ukusetshenziswa okuphumelelayo kwesikhala esitholakalayo kanye nemodeli eguquguqukayo, lapho izinsiza zinganwetshwa khona uma kudingekile.
I-Mirror Yeseva nge-Ethernet
I-euroNAS HA-Cluster inikeza ukutholakala okuphezulu ngesikhathi sangempela, ukuphindaphinda kwedatha okuqhubekayo nokuvumelanisa phakathi kwamaseva amabili ahlanganisiwe. Zombili amaseva anemininingwane efana nokuthola i-redundancy, ngakho uma kwenzeka omunye wabo ehluleka, amaklayenti angakwazi ukufinyelela idatha yabo. Futhi, kungenzeka ukuthi uchaze ukuthi yiziphi izinsiza okufanele zigijime kunoma iyiphi iseva, okuvumela ukusetshenziswa okusebenzayo kwamaseva nokusebenza okuphakeme ngesikhathi esifanayo. Ngaphezu kwalokho, i-HA iqhaza isekela izinsiza eziningi ezinjengeSMB / CIFS / AFP, ukuqinisekiswa kwe-Active Directory (ye-CIFS ne-AFP), i-NFS ne-iSCSI.
I-Mirror Yeseva nge-Fiber Channel
I-euroNAS SAN Cluster isekelwe ubuchwepheshe besiteshi se-Fiber ekwakheni iqoqo eliphezulu lokutholakala, nokusebenza okungcono kwedatha yokufaka idatha efanelekile ekuxhumaneni kokugcina kanye namafomu okusebenza adijithali A / V. I-SAN Cluster isebenzisa i-euroNAS ubuchwepheshe be-SMART SAN MIRROR (eSSM), okusho ukuphindaphinda kwesikhashana sangempela sesikhathi se-server sokubuyiswa okuphezulu.
Izifinyezo zenza umsebenzisi enze ikhophi eyodwa noma ehleliwe yesimo se-share / iSCSI / FC endaweni ethile ngesikhathi. Lesi sithombe sihlanganisa ukucushwa nokudibanisa idatha, uma kudingeka, ingabuyiselwa esimweni sokwabelana ngaso lapho iphuzu lenziwe khona.
Ukuvumelanisa kweseva yithuluzi eliphambili, elingadlulisa idatha enethiwekhi yendawo noma ngaphezu kwamade amade ngokuthembeka nangokushesha. Phakathi nokuvumelanisa kwedatha, uma ukopisha amafayela amakhulu, uguqule ama-byte kuphela kulawo mafayela adluliselwa, okwandisa ukusebenza kakhulu futhi agcina umkhawulokudonsa. Isici sokuphendula se-Snapshot ikuvumela ukukopisha "okuqukethwe okufriziwe" - lokhu kuthuthukisa ukuhambisana kwedatha lapho ukopisha idatha ebukhoma. Imisebenzi yokuvumelanisa ingahlelelwe ukuthi isebenze nsuku zonke noma ngehora.
Lesi sici sisetshenziselwa ukwenza isipele kwamanye amaseva we-NAS angaphandle kwiseva ye-euroNAS.
Ukusekelwa kwe-Hardware RAID
Imikhiqizo ye-euroNAS isekela i-RAIDs yama-hardware enezilawuli ezihlukahlukene ezivela kubakhiqizi abahlukene ukuze kusebenze kangcono amaqoqo we-RAID. Amaseva we-euroNAS anikeza amathuluzi wokuphatha we-RAID we-hardware ahlangene ngaphakathi kwe-interface kanye nezaziso ze-imeyili zokusekela. Ihlanganisa ne-LSI Agent Management Agent ukuze kube lula ukuphathwa.
Ukusekelwa kwe-Software RAID
Isisombululo se-redundancy esisebenzayo ngokusekelwa kwazo zonke izakhiwo ezinkulu ze-RAID ezihlanganisa RAID 0, 1, 10, 5, 6. Iphinde isekele ukukhuliswa kwamandla oku-intanethi, i-Hotspare Drive kanye nesaziso se-imeyli uma kwenzeka ukwehluleka kwediski.
Ukusekelwa kwe-APC UPS
I-euroNAS Server izovala ngokuzenzakalelayo iseva kubhethri ephansi. Isaziso esheshayo nge-imeyili sithunyelwa uma kwenzeka ukuhluleka kwamandla. Amadivayisi we-Network ne-USB APC UPS nawo asekelwa.
Ukuxhumeka kwenethiwekhi kungahlanganiswa ku-failover redundancy noma ukukhuphuka kokuphuma.
I-euroNAS izothumela imilayezo ye-imeyli uma kwenzeka i-disk / ukuhluleka kwamandla, imibiko yokuvumelanisa, izaziso ze-UPS noma izahlulelo.
Ukusetshenziswa Kokusetshenziswa Kokusetshenziswa Kanjani
Kwaxhumana nabantu ababili, I-La Grange Post futhi Ikhukhamba & Inkampani ezinhlangothini zombili zase-US ukubona ukuthi kungani bathenga i-BlueStor SHARE yeJMR nokuthi basebenzisa kanjani uhlelo. Isisekelo sase-Southern California I-La Grange Post wayekhethe isitoreji sesitoreji senkampani njengesikhungo sendawo yokugcina isitoreji, ngaphezu kokungeza ukwandiswa kwe-JBOD ye-200TB amandla okukhulisa ukukhula kwesikhathi esizayo.
I-La Grange Post, evule iminyango yayo ku-2008, inikeza izinkampani zokuqukethwe kanye nabakhiqizi ngezinkonzo ezihlukahlukene kusukela ekuguqulweni kwedijithali nokudiliva, ekuhlelweni kwevidiyo / okulalelwayo nokulungiswa kombala, ekubuyiseleni umsindo / ividiyo, amathrekhi angaphandle afana nokudluliselwa kwefilimu kuya kwevidiyo . Isikhungo kanye nabasebenzi bayo bamakhasimende we-centric, abanokuhlangenwe nakho ekusakazeni, ematatsheni, e-AV ezinkampani kanye nasezinhlelo ezisekelwe kuwebhu, futhi kufaka phakathi i-4K off-line kanye nezindawo zokuhlela ezisekhompini, amaphakheji aphelele, ukuthuthukiswa kwezithombe, abaqambi bomculo bokuqala kanye nesimo -of-the-art izakhiwo ezizwakalayo.
I-BlueStor SHARE ye-JMR ne-10GbE ukuxhuma kwe-I / O yefayibha, enikwe amandla yi-euroNAS OS, isebenza njengebhodi eliphakathi nokugcina kuzo zonke izindawo zokuhlela ze-La Grange, ezisebenzisa i-Mac ne-Mac AVID amapulatifomu esofthiwe.
Ngokusho komnikazi wesakhiwo u-Ayal Nitzan, "Sichitha isikhathi esiningi sifuna izimpahla kulo lonke ukushayela okuningi futhi asikwazanga ukubona konke endaweni eyodwa noma iwindi le-GUI ngaphambi kokuhlanganisa uhlelo lokugcina lwe-JMR SHARE NAS. Izidingo zethu zesistimu zifake isimiso esizayo esizokwazi ukusingatha izidingo zokufunda / ukubhala kuze kufinyelele kumafomu okusebenza we-4K kusuka ezindaweni eziningi zokuhlela, ube nezinga eliphakeme kakhulu lokuthembeka, ukusebenza okuphelele, ukusekelwa kweklayenti okuhle kakhulu futhi ngentengo enengqondo. "
Ngokufanayo, iBekkley, eN West Virginia esekelwe Ikhukhamba & Inkampani usebenzisa inkampani I-BlueStor SHARE Iseva Yokugcina Yesevisi ngekhono le-160TB njengendawo yokugcina yokugcina ye-Mac esekelwe i-Final Cut Pro ne-After Effects amaphrojekthi.
Ikhukhamba & Inkampani, evule iminyango yayo ku-2003, inikeza amabhizinisi nabakhiqizi ngezinkonzo ezihlukahlukene ezifaka ukukhiqizwa kwevidiyo, ukuklanywa kwewebhu, Multimedia ukukhangisa, nokudweba okucacile kulo lonke i-Mountain State nakulo lonke izwe. Le nkampani ithinta ithimba le-client centric elinolwazi oluhlanganisa abahleli bevidiyo, abaqhubi bekhamera, abaqhubi be-drone nabaqondisi bokusakaza bukhoma abahlinzeka ngamaklayenti awo okukhiqizwa kwemikhiqizo yevidiyo kubandakanya ukuhweba imoto, amavidiyo okuqeqesha amawebhusayithi, amavidiyo aphromotha amawebhusayithi, nokubukwa kwemicimbi ebukhoma, kanye nokuningi -ikhamera ishaya amandla okuphila ekusakazeni imicimbi kubantu abayizinkulungwane ku-intanethi.
I-BlueStor SHARE ye-JMR ne-10GbE ukuxhuma kwe-I / O yefiber, enikwe amandla yi-euroNAS OS, isebenza njengedrayivu eyinhloko kanye nenqolobane yokukhiqiza kwamakhakhamba nokukhiqizwa kwamakhamera nokukhiqizwa kokuthunyelwe. Umnikazi wesibonelelo uDwane Muncy uchaza izinselele zokungena ngaphambi kokukhetha i-SHARE, "Sichitha isikhathi esiningi sisesesha impahla kuyo yonke imishini yokushayela noma sasihlehlisiwe, futhi asikwazanga ukubona konke endaweni eyodwa ngaphambi kokufaka iseva yokugcina ye-JMR NAS kwinethiwekhi yethu. Izidingo zethu zokusebenza kanye nezikhwama zihlanganisa uhlelo oluhlelekile oluzokwazi ukusingatha izidingo zokufunda / ukubhala kuze kube sesikhathini sangempela sesikhathi sokusebenza se-4K kusuka ezindaweni eziningi zokuhlela, ukusebenza okulula, okunezinga eliphakeme kakhulu lokuthembeka, iklayenti elihle kakhulu ukusekelwa kanye nentengo enengqondo. "
Ikhukhamba & Inkampani yocwaninga abathengisi abaningi ngaphambi kokuthatha isinqumo ku-JMR kanye nohlelo lwabo lwe-BlueStor SHARE. Ungeze u-Muncy, "SHARE uhlole wonke amabhokisi ethu okudingekayo kwikhwalithi yokwakha, ukwethenjelwa, ukusebenza kanye nomthamo, ukusebenza, intengo nangemva kokusekelwa kwezokuthengisa. Inzuzo eyengeziwe yukuthi uhlelo lungakwazi ukuphatha izinhlelo zokusebenza zokulondoloza ezabelwana ngokugcwele futhi nokuba nelayisensi yesofthiwe engakhokhisi umthamo wesitoreji owengeziwe. Lena umkhiqizo ophezulu-ovela kunkampani yeklasi emhlabeni. Njalo lapho nginombuzo, i-JMR kanye nabasebenzi bayo bokusekela abanolwazi olunzulu kakhulu, babekhona lapho ukuze bangisize ngilungise le nkinga. "
10GbE 1GbE 4K I-server ye-4K / UHD yokudlala Avid Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe Ukusakazwa-Abezindaba Komphakathi Ukusakaza-SocialMedia Ukusakaza-SocialMeida I-Drone Ukuhlela HDR HEVC Ukuhlanganiswa I-JMR ukukhiqizwa kokuthunyelwe production Raid Iseva Ubuchwepheshe be-TV I-TVU Izinethiwekhi Umlingisi wevidiyo Ukukhiqizwa kwevidiyo	2019-07-15
Ngaphambilini: I-Sasani Studios Yakha i-Next Generation Media Foundation ne-EditShare Workflow Solutions
Olandelayo: Uchwepheshe we-2019 -2020 wefilimu nevidiyo (ngenendima encane yokufundisa)